Xa uneminyaka yobudala, iimfuno zolusu lwethu luguquka kakhulu. Ngokubhekiselele ekunciphiseni kwinqanaba le-estrogens emzimbeni, ulusu lufuna iimpawu eziza kunceda ukugcina ukubonakala kwebala kunye nentsha ixesha elide. Ukunyamekelwa kwekhwalithi ekhulileyo ebusweni kuwe kukunceda!
Kule minyaka, ulusu luba lumile, amabala e-pigmentation avela kwaye ngenxa yoko - imibimbi ibonakala ngakumbi. Ngethamsanqa, sinokukunceda ulusu lwethu lujamelane nale ngxaki. Iimveliso eziqhenqcezayo ziyamangaliswa yinkalo yobungcali bezobugcisa, ezilungelelaniswa neemfuno zesikhumba. Ukubheja kufuneka kwenziwe kwintlanganiso ebizwa ngokukodwa ukuba ilwa neenguqu ezinxulumene neminyaka.
La mahomoni anefuthe ngqo kwiimeko zesikhumba. Inani elikhulu lama-receptors e-esrogen ebusweni. Akumangalisi ukuba nokunciphisa okuncinci kwimali yabo kuphazamisa imeko yesikhumba. Njengomthetho, utshintsho olukhulu luya kwenzeka ngexesha lokusesikweni. Ukuwa kwinqanaba le-estrogen emzimbeni kuchaphazela ukuncipha kumsebenzi weengqungqungquthela ezihlambulukileyo, ezikhokelela kwesikhumba esomileyo. Ubuninzi bee-collagen fibers ziyancipha (zinoxanduva lwe-elasticity of the skin), imicu ejulile kunye ne-pigmentation kubonakala, kwaye ulusu luba lukhuni kwaye luba buthaka. Kwaye, ngelishwa, lide kuzo zonke iingxaki esimele sijamelane nazo ekudala.
Nasi isibambiso sesikhumba esincinci nesikhuphayo! Ngona i-cream engcono kakhulu ayiyi kuba nemiphumo emihle xa uyisebenzisa ngokungavumelekanga.
Iipeptides, okanye izicatshulwa ezivela kwesoya enomsoco, zi-antioxidants ezinamandla. Kodwa akukho konke! Ngenxa yesakhiwo sabo (esifana ne-estrogens), ezi zixhobo zingathintela i-receptors ezihambelana nolusu kwaye ziphucule kakhulu umveliso we-collagen.
Ukukhanya okunyamezelayo ukukhanya kwangexesha elide kungakufanelekanga kwesikhumba sakho. Ngoku ufuna unonophelo olunzulu lwesikhumba sakho esikhulileyo.
I-retinol ithintela inkqubo yokuvuselelwa kwesikhumba. Ibuyisela iiseli zesikhumba, ichaphazela ukwahlula kwazo kwaye ilawula umsebenzi we-secbumtion we-sebum, ukuveliswa kwe-melanin kunye ne-collagen synthesis. Ingxaki yalo kuphela - ingabangela ukucaphukisa, ngoko umlinganiselo wayo kwizimonyo akufanele udlule kwi-0.01%.
I-Vitamin C okanye i-ascorbic acid
I-antioxidant, ikhanyisa isikhumba, into ebalulekileyo kwimveliso ye-collagen. I-Vitamin C ikhutshwa ngokukhawuleza kwifom ecocekileyo. Ngoko ke, xa ukhetha ukhilimu, qaphela ipakethe (kufuneka ifakwe uphawu) kunye nokuxinwa kwevithamini.
Ikhumba elikhulileyo lifuna ukunyuswa, ngoko ke iifrimu ezininzi zalolu hlobo luquka i-hyaluronic acid, zinezixhobo ezinamandla zokunyusa.
I-AHA, okanye i-alpha hydroxy acids yancinciza isikhumba, lawula ukukhupha i-exfoliation, igubungele ubuso besikhumba kwaye ifuthe umveliso we-collagen kuyo. Okokuba baqala ukusebenza, kwi-ukhilimu enezinga eliphantsi le-pH kufuneka babe ne-2%. Ngaphandle koko, zijika zibe zikarati kwaye zilahlekelwe zonke izakhiwo eziwusizo.
Xa uneminyaka yobudala, uhla lwe-lipids olukhuselayo luyancipha kakhulu. Kanye ne-"sement" ehlukeneyo kwi-strumum corneum (ukuzaliseka komsebenzi womqobo wokukhusela). Ukuzaliswa kwee-pid stocks kuba ngumsebenzi oyintloko wokusebenza kakuhle kunye nolutsha oluncinci lolusu. Into ebaluleke kakhulu kwesikhumba - i-NUHK (i-unsaturated fatty acids) yokunakekelwa kwesikhumba ekhulileyo ebusweni. Zangena kwinqanaba le-horny yolusu kwaye liqinise isakhiwo sayo. Ngama cream, njengomthetho, zenzeka ngolu hlobo lweemifuno zemifuno.
Iimpawu zee-molecular weight
Amehlo, imilomo, intamo - kulezi ziko ulusu luyi-thinnest, kunye nenani elincinci le-adipose tissue kunye neengqungqungquthela zenyama. Ngoko ke, ngokukhawuleza omisiwe, kwaye imibimbi apha ibonakala ngakumbi xa kuthelekiswa namanye amasayithi. Ukuba ulusu lwethenda, kufuneka ulunake ngokucophelela ulutsha lwakho kwaye uhlawule ingqalelo ekhethekileyo xa ukhulile. Sikucebisa ukuba uthenge izicumbiso eziphezulu zenzelwe isikhumba ejikeleze amehlo, ngomlomo nangentamo, kwaye uyisebenzise rhoqo.
Kufuneka zibandakanye zonke izixhobo esizichazile. Ikhefu leSuku kufuneka libe nezihlungi zelanga. Usuku nobusuku kufuneka zibandakanye izixhobo ezikhanyisa ulusu. I-khilimu kufuneka ibe nokuhambelana nokukhanya.
Sidinga lipids! Isilungiso esihle kakhulu esikhumbeni esilukhulile sisisityebi, i-creams enomsoco. Bomeleza isakhiwo sesikhumba, siyakhusela size siphuculise kakuhle.
Ukuze iivithamini zisebenze, kubalulekile ukuba zizithabathe rhoqo, ngokweengcebiso zegqirha. Iziphumo ziya kuphawulwa ngenyanga!
Imaski ekuchaseni ukuguga kwesikhumba
Ugubungela ubuso ekhaya
Ukubamba - ukukhangela okusha-2016
Iindlela ezili-10 ezilula zokujonga kakuhle
I-vitamin isiselo "I-cranberry ephawulekayo"
Izifo zesibindi: unyango ngeoats
Izambatho eziqhelekileyo zabasetyhini abaneempawu ezikhethekileyo
Imiba yengqondo yokukhulisa abantwana kwintsapho
Indlela yokomeleza iinwele ebusika
Ukulungelelanisa ukwakheka ubuso obunzima
Ukukhathala kwamehlo xa usebenza kwikhompyutha
Indlela yokukhetha i-lipstick efanelekileyo?
Utywala. Izizathu, iindlela zokonyango kunye nokukhusela